အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေဘာကြောင့် ဟာဂ်ျဝတ်မပြုကြတာလဲ ? ~ The Ahmadi Post : Myanmar
အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေ ဘာကြောင့်ဟာဂ်ျဝတ်မပြုကြတာလဲ? သို့ပေမယ့် သူတို့က ကာဒီယံ (အဟ် မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အား စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ်မွေးဖွားရာ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြို့၏အမည်) ကိုတော့ အမြတ်တနိုးထား သွားရောက် တတ်ကြ ပါတယ် ? စသဖြင့် ပြောဆိုကြခြင်းကတော့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များအပေါ် အဟ်မဒီ မဟုတ်သူများ ရဲ့ ပြစ်တင်စောဒကဝင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်အဟ်မဒီမဟုတ်သူများက အဟ်မဒီ များကိုရည်ညွှန်း ပြီး သူတို့တွေက အစ္စလာမ့်တမန်တော်ကြီး (သခင့်အပေါ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသန္တိသုခ အပေါင်း ခညောင်း ပါစေ။) မွေးဖွားရာနေရာဒေသထက် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာဒေသတစ်ခုကိုပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုး ထားကြတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့တွေဟာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ဘူး စသဖြင့်ပြောဆို တတ်ကြပါတယ်။
ဤသည် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေကိုယ်တိုင်က အဟ်မဒီ မွတ်စလင်မ်များကို ဟာဂ်ျမပြုနိုင်အောင်တားမြစ်ထားမှတော့ အဟ်မဒီတွေက ဘယ်လိုလုပ်ဟာဂ်ျပြု လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ။ မိမိရဲ့ဘ၀တစ်သက်တာမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ကြိမ်ဟာဂ်ျပြုဖို့ရာ မွတ်စလင်မ်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဟ်မဒီတွေ ကိုတော့ ဆော်ဒီအစိုးရက ဟာဂ်ျဝတ်မပြုနိုင်အောင်တားမြစ်ထားပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာတော့ ဟာဂ်ျ ဝတ်ပြုချင်တယ်၊ အွမ္မရာဝတ်ပြုချင်တယ်ဆိုရင် စာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကတိခံဝန်ရပါ တယ်။ အဲဒီခံဝန်ချက်မှာ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ် (ငြိမ်းချမ်းခြင်းသက်ရောက်ပါစေ)ကို တမန် တော်အတုအယောင်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ကြေညာရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘယ်အဟ်မဒီ မွတ်စ လင်မ်မှ အဲဒီလိုခံဝန်ချက်မျိုးမှာ လက်မှတ်မထိုးနိုင်ပါဘူး။ အစ္စလာမ်မှာ ဟာဂ်ျဆိုတာ အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်သက်သက်အတွက် ပြုလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်ုးဆောင်တာဖြစ်တာကြောင့် ဟာဂ်ျပြခြင်းဖြင့် အလ္လာဟ် အရှင်နဲ့နီးစပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရရှိပါတယ်။ ဟာဂ်ျဝတ်ပြုရင်တော့ လောကီရေးရာ ကိစ္စတွေအားလုံးကို ဘေးဖယ်ထားရပါမယ်။ ရုပ်စွအဆုံး မိမိကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အဝတ်တွေ ကိုတောင် ချန်ထားခဲ့ရပါမယ်။ အဲဟ်ရမ်လို့ခေါ်တဲ့ အပ်ချုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ပိတ်ဖျင်စနှစ်လွှာ ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်ပြီး ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို စွန့်လွှတ်ရပါတယ်။ ဒီလိုအားဖြင့် ရည်ရွယ်ရင်းပန်းတိုင်တူကြတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေအားလုံးဟာ တတန်းတစားတည်းဆိုတာကို ဖော်ပြရာ လည်းရောက်ပါတယ်။ ဒါဆိုဘာကြောင့် ဟာဂ်ျဝတ်ပြုခြင်းမဏ္ဍိုင်ထဲကို နိုင်ငံရေးတွေ ရောထွေးစေ လိုက်ရတာလဲ။ ဘယ်သူကတော့ဖြင့် ဟာဂ်ျပြုနိုင်တယ် ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ပြုခွင့်မရှိပါလို့ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါ။ အဟ်မဒီမဟုတ်သူတွေကတော့ ဟာဂ်ျဆိုတာမွတ်စလင်မ် တွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြမှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေကတော့ လားအိလားဟအိလ္လာလ္လားဟို့ မုဟမ္မဒ်ဒွရ် ရစူလွလ္လာဟ်ဆိုတဲ့ ကလီမာရှဟာဒါကို ရွတ်ဖတ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူတွေက အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေကို မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခွင့်ရှိပါသလဲ။ ဆော်ဒီအစိုးရဖြစ်စေ၊ ပါကစ္စတန်အစိုးရဖြစ်စေ မွတ်စလင်မ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေကို ဟာဂ်ျပြခြင်းကနေ တားမြစ်ပိုင်ခွင့် မည်သူ့ဆီမှာမှ ရှိမနေပါဘူး။ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေကို ဟာဂ်ျမပြုနိုင်အောင်တားမြစ်ထားပြီးကာမှ သူတို့တွေက ဟာဂ်ျဝတ်မပြုကြဘူး၊ ဒါကြောင့်မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ဘူးလို့သမုတ်ကြပါတော့တယ်။ အလ္လာဟ်အရှင် ထိုသူတို့အား အသိတရားရစေတော်မူပါ။
အချက်အလက်တွေအရတော့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေလည်း ဟာဂ်ျဝတ်ပြုဖို့ မက္ကာရွှေမြို့တော် ကြီးဆီသွားရောက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါကစ္စတန်ကနေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကံကောင်း ထောက်မစွာပါပဲ၊ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘယ်လိုကတိကဝတ်မှပြုစရာ မလိုဘဲ ဟာဂ်ျပြုလုပ်ဖို့သွားရောက်နိုင်တာကြောင့် အဲဒီလိုနိုင်ငံတွေက အဟ်မဒီတွေဟာ ဟာဂ်ျပြုဖို့ ရာ သွားရောက်နေကြပါတယ်။ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေဟာဂ်ျနဲ့ အွမ္မရာဟ်ဝတ်ပြုဖို့သွားရောက်ရ ခြင်းကတော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာမှာတောင် အဟ်မဒီအချို့ ဟာဂ်ျဝတ်ပြုဖူးပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ဘာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေဘာဆိုတာကို ကြေညာစရာမလိုခဲ့ဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ ကျိုးနွံလှတဲ့အစေခံများအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်သာသနာထဲက အသင်းကွဲပေါင်း ၇၃ ခုမှာ ကွဲပြားတဲ့ယုံကြည်မှု တွေရှိနေပါတယ်။ ဘယ်အသင်းကမှန်ကန်ပါသလဲ။ စွန္နီမွတ်စလင်မ်တွေက မှန်ကန်ပါသလား၊ ဒါဆို ရှီယာမွတ်စလင်မ်တွေက စွန္နီမွတ်စလင်မ်တွေလို ယုံကြည်ချက်မထားကြတာကြောင့် ဟာဂ်ျပြုဖို့ အခွင့်မရှိတော့ပါ။ ထပ်စဉ်းစားစရာပါပဲ။ စွန္နီထဲမှာမှ ဘယ်လိုစွန္နီလဲ၊ ၀ဟာဘီလား၊ ဂျမာအသ်သေ အစ္စလာမ်မီလားစသဖြင့် ဘယ်အသင်းကွဲထဲကပါလဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ အခွင့်အာဏာရစွန္နီတွေလို အယူမထားကြတဲ့ စွန္နီတွေအားလုံး ဟာဂ်ျပြုဖို့အခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။ ဒီလိုမျိုးအဆုံးအဖြတ်တွေက ဘယ်ကနေရောက်ရှိနေရာယူလာခဲ့ရတာလဲ? ဒါကြောင့်လဲ အစ္စလာမ့်တိုင်းပြည်တွေဟာ ယနေ့အချိန် မှာနွမ်းပါးချိနဲ့နေကြပါပြီ။
သို့သော် ဟာဂ်ျမပြုနိုင်လို့တားမြစ်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းက အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ချည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောတမန်တော်မြတ်ကြီး (သခင့်အပေါ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသန္တိသုခအပေါင်း ခညောင်းပါစေ။)ကလည်း ကုရိုက်ရ်ှများရဲ့တားမြစ်မှုကြောင့် ဟာဂ်ျမပြုခဲ့ရတဲ့အခါမျိုး ရှိခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အစုအဝေးထဲမှာသာရှိနေကြရင်တော့ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်း ချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားပါလဲ။
ကာဒီယံကို ဘယ်အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်ကမှ ဟာဂ်ျဝတ်ပြုဖို့သွားရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ကာဒီယံဆိုတာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အား စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ် မွေးဖွား ရာနေရာဆိုတာမှန်ပေမယ့် အဟ်မဒီတွေက အဲဒီနေရာကိုသွားရောက်ဖို့နှစ်သက်ကြပေမယ့် မက္ကာရွှေ မြို့တော်အစား ဟာဂ်ျပြုခွင့်ရှိတဲ့နေရာလို့ ဘယ်အဟ်မဒီကမှ မှတ်ယူထားခြင်းမရှိပါ။ ကာဒီယံကို သွားဖို့ဆိုတာ အဟ်မဒီတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါ။ ဒါပေမယ့် မြင့်မြတ်တဲ့ကာဘာဝတ်ကျောင်းတော်ရှိရာ၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းကို ခဝပ်ကိုးကွယ်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ရှိရာနေရာကိုသွားပြီး ဟာဂ်ျဝတ်ပြုဖို့ဆိုတာကတော့ အဟ်မဒီတိုင်းအတွက် ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုသွားချင်တဲ့ဆန္ဒများစွာထက် အဆပေါင်းနှိုင်းလို့မရအောင် အရေးကြီး လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်လည်းဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်အတွက် သွား ရောက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မက္ကာရွှေမြို့တော်သို့သွားရောက်ဟာဂ်ျဝတ်ပြုခြင်းဆိုတာကို ဘယ် နေရာဘယ်ဒေသ ဘယ်မြို့နဲ့မှ အစားထိုးလို့မရပါ။